October | 2004 | Malagasy Ranoray
Filed under: Uncategorized — serasera @ 12:48 am
Noho izao faha-5 taonan’ny serasera.org izao (3 oktobra 1999 – 3 oktobra 2004) dia mahafaly ahy ny manolotra ity famelabelarana kely momba ny serasera.org ity.
Nateraka hiombona sy hifandray amin’ny manodidina azy ny olona… raha tsy izany dia tsy ho "nateraka" izy. Vao teraka izy dia niankin-doha ary mandra-pahafatiny dia tsy hahavita tena. Mety hihambo ho olona afaka izy saingy ny fahafahany dia mbola fiankinana amin’ny fijerin’ny hafa ihany. Na ao anatin’ny fahanginana tanteraka aza izy… dia mbola mifandray ihany satria endriky ny fifandraisana izany. Fifandraisana ny olombelona, fiombonana sy firaisana. Izany toetra izany no mahatonga azy tsy maintsy hifanerasera, hiserasera, hila serasera. Fiainana izany ny serasera… ka manaraka ny onjam-piainana sy ny fivoatry ny fiainana. Koa amin’izao fivoaran’ny teknolojia izao dia mandray ny toerany ihany koa ny serasera. Serasera amin’ny alalan’ireo fitaovam-pifandraisana isan-karazany… fa ny tanjona dia iray ihany, fiombonana sy firaisana.
Resadresaka teo antokontanin’ny oniversité anakiray nianarako tany Nairobi Kenya momba ny mety hifampitam-baovao ho an’ireo Malagasy am-pielezana no fototry ny serasera. Tany amin’ny taona 1999. Rehefa natao ny fanadihadiana dia efa nisy ny fitehirizana ny adiresy imailaky ny Malagasy am-pielezana maro nampiasaina tamin’io fifampitam-baovao io. FBRA sy FBRA2 no anarany. Rava anefa io tamin’ny volana Jolay 1999. Nipoitra ary ny hevitra hananganana azy indray amin’ny anarana hoe Serasera Malagasy. Nokarohana ny fitaovana hanampy koa dia nofidina ny eGroups izay nanolotra izany fitaovana izany maimaim-poana. Ny 3 oktobra 1999 no nisokatra voalohany ny Serasera Malagasy. Niainga tao Nairobi Kenya ny fitantanana. Nasaina handray anjara tamin’izany ireo Malagasy rehetra tratra antso. Nampiasaina ihany koa ilay lisitra hita tao amin’ny takelak’i Tahiry nikarakara ny FBRA2. Nahatratra 800 mahery ny adiresy nasaina tamin’ny voalohany. Ny ankamaroan’ireo adiresy ireo anefa dia efa tsy nandeha intsony. Vokany dia 300 mahery kely no nanaiky hisoratra anarana. Nandritra ny telo volana dia mbola nifampitady tamin’ny fitantanana sy ny sivana isan-karazany. Mbola nosokafana mantsy ny lisitra, izany hoe afaka manoratra daholo na ny olona hafa ivelany aza. Betsaka ihany koa ireo nangataka hiala sy nangataka hiditra. Voambolana nalaza tamin’ny FBRA2 ny hoe "mangataka kintana", izany hoe mangataka mba tsy handray hafatra intsony… dia mbola notohizan’ireo zatra izany teto amin’ny serasera.
Dia nivoatra tsikelikely ny serasera. Nandritra ny fifanakalozana teo anivon’ny Serasera anefa dia nandre aho fa misy ihany koa seham-pifandraisana toa ny serasera niainga avy any Suisse. I Rao no nitantana azy, serasera@caoserv.ch … ary toa efa nipoitra talohan’ny Serasera izay niainga avy tao Nairobi ilay izy. Niezaka niditra tao aho ary nifandray tamin’i Rao sao mety hisy ny fanakambanana ny Serasera roa tonta. Tsy tanteraka anefa izany satria tsy mitovy, hoy izy ireo, ny tanjona kendrena. (Io no andikako ny teny hoe cibles samihafa). Koa dia niara-nisy sy niara-nampiasaina teny ary ny Serasera roa.
Zavatra maro no nifamahofaho tamin’ny taona voalohany nisian’ny Serasera. Teo ny olana isankarazany izay nila hahakivy. Ny olana pôlitika nisy teo anivon’ny mpiserasera. Ny tsy fifankahazoan’ny firehan-kevitra. Ny fanaratsiana sy ny fanambaniana mihitsy aza avy amin’ny Malagasy mitovy rà amin’ny tena. Maro lavitra koa anefa ireo fankaherezana avy tamin’ny namana mpiserasera. Tsy vitsy ny fifandraisana niorina. Nanjary nifankahalala ny olona samihafa fihaviana. Nifanampy sy nitady vahaolana tamin’ireo olana nitranga tao Madagasikara. Tsy ho voatonona eto ny anarana fa betsaka ny nankahery manokana.
Notohanana tamin’ny fananganana Vohikala (Site Web, araka ny fandikan’i Sahoby) ny Serasera Malagasy izay notantanako. Nandritra ny herintaona dia nandramana tamin’ny fampiantranoana ny Serasera ireo mpampiantrano nalazalaza toa ny Free.Prohosting, VirtualAve. Mbola tsy ampy anefa ny fahaizana teo amin’ny fitantanana ny haitao koa nitsipozipozy ny Vohikala. Tamin’ny taona 2000 dia napetraka tao amin’ny geocities.yahoo.com aloha mandra-pitady ny vahaolana. Taorian’izay no nahita ny Free.fr izay mpampiantrano vohikala maimaimpoana sy mampiasa ireo haitao vaovao toa ny PHP sy ny MySQL. Ireo haitao ireo dia ahafahana manamboatra takelaka amin’ny fomba tsotra sy ahafahana mitahiry zavatra maro. Nihanalaza rahateo izany haitao izany ka maro ny olona nianatra azy. Dia rafitra nianatra izany koa aho. Ny olana anefa dia avy any Frantsa ihany no ahafahana mahazo ilay Free.fr. Nanomboka teo ary ny fiaraha-miasa akaiky tamin’i Doc Strange izay nanaiky hikarakara ny fangatahana ny fampiantranoana ny serasera.free.fr. Nandritra ny herintaona izany dia tao amin’ny http://serasera.free.fr no niantrano ny Serasera Malagasy. Taty aoriana rehefa hita fa tokony hanana ny anarana manokana ny Serasera dia tapaka ny hevitra fa hanofa lohamilina koa dia nalaina ny anarana serasera.org izay mifanentana kokoa amin’ny sehatry ny fifandraisana sy fikambanana. Nisy ny vola niala tamin’izany fampiatranoana izany izay mbola isaorana manokana an’i Doc Strange amin’ny fitantanana azy. Nanomboka tamin’ny volana Aogositra 2002 ary dia nampiantranoin’ny OVH (Frantsa) ny serasera.org.
Tsy nitsahatra niroborobo ny serasera.org na eo amin’ny lafin’ny isan’ny mpikambana na eo amin’ny isan’ny takelaka arosony. Naseho sy nohindrahindraina hatrany ny lanjan’ny Teny Malagasy. Anisan’ireo lohany amin’ny takelaka miteny malagasy ranoray ny serasera.org. Nezahina notazonina ihany koa ny maha maimaim-poana ireo zavatra rehetra atolotry ny serasera. Ireto avy ary ny takelaka efa novokarin’ny serasera.org hatramin’izao fotoana izao.
http://lisitra.serasera.org : Takelaka misy ny hafatra tahiry izay nitranga hatramin’izay niandohan’ny serasera. Ity takelaka ity no tena fototry ny serasera.org hatramin’ny voalohany. Ato no misy ny fidirana handray hafatra sy handefa hafatra ho an’ny Malagasy mpikambana ao amin’ny serasera.org. Adiresy tokana serasera@yahoogroupes.fr dia voarain’ny mpikambana 760 mahery ny hafatra (1 oct 2004). Ny mpikambana ihany no afaka mandefa hafatra amin’io adiresy tokana io.
http://tononkira.serasera.org : Takelaka nametrahana ireo tononkira malagasy izay nampidirin’ny mpitsidika ny takelaka. Misy ihany koa ny sary sy ny mombamomba ireo mpanakanto izay fantatra. Amin’izao fotoana izao dia misy tononkira 1700 mahery sy mpihira 300 mahery voatahiry ao amin’io takelaka io.
http://namana.serasera.org : Takelaka nosokafana mba hifandraisana sy hihaonan’ny samy Malagasy. Ny mpikambana (namana) dia afaka mandefa hafatra manokana ho an’ny namana izay tiany handray izany. Manana boatin-kafatra manokana misy ireo hafatra nalefan’ny namana ho azy. Afaka mametraka ny sariny sy ny mombamomba azy ho hitan’ny namana hafa. Amin’izao fotoana izao dia misy 4600 mahery ny namana (1800 izy tamin’ny herintaona toa izao).
http://chat.serasera.org : Takelaka ahafahana miresaka mivantana amin’ireo namana hafa.
http://vetso.serasera.org : Takelaka misy ireo tononkalo sy vetsovetso nosoratan’ireo namana zary lasa poeta malagasy. Misy tononkalo 800 mahery amin’izao fotoana anoratana izao.
Mbola hisy hatrany ny ezaka hananganana takelaka hafa miankina amin’ny fotoana sy ny zava-misy.
Ankoatran’ny takelaka anefa dia efa nisy koa ireo fihaonana isankarazany izay nataon’ny namana na tao Madagasikara izany na tany ivelany. Fihaonana nifankahafantarana, nieritreretana tetikasa sy ny sisa… azonao jerena ao amin’ny tahirintsary ireo sary vitsivitsy mirakitra izany fihaonana izany
Tsy vitan’olon-tokana ny fitantanana ireo rehetra ireo. Eo dia eo aloha ireo mpikambana isan-karazany izay mampiaina ny serasera.org. Raha tsy teo ny mpikambana dia zary trano haolo ihany ny serasera.org. Fa eo indrindra indrindra ihany koa ireo namana isan-karazany izay manohana amin’ny lafiny maro na ara-kevitra izany na amin’ny asa na ihany koa ara-bola. Tsy ho ary ho voatanisa eto avokoa izy rehetra fa singaniko manokana ireto olona ireto izay miara-miasa akaiky amiko.
Lucien Robia : Miara-mitantana ny lisitra serasera.org, mitantana ao amin’ny namana.serasera.org, mpandrindra ny forum.serasera.org, solotenan’ny mpandrindra mipetraka ao Madagasikara, manampy eo amin’ny tetikasa karakarain’ny serasera ary manampy ara-kevitra be dia be ihany koa .
Doc Strange : Miandraikitra ny fampiantranoana ny serasera.org, mitantana ny ara-bola sy ny dokambarotra. Mpanome soso-kevitra mafana fo eo amin’ny fitantanana ankapobeny.
Liva Eliasy : Mpanao gazety namana, miara-mitantana ny lisitra ao amin’ny serasera.org.
Clarys Mamitiana : Mpandroso hevitra sy manampy eo amin’ny tetikasa.
Lanto : Mpitantana sy mpandrindra ny namana.serasera.org, mpitantana manokana ny tononkira.serasera.org, mpikarakara ny RVG na Radio Vazo Gasy, manampy be dia be eo amin’ny hevitra ihany koa.
McFy : Mandray anjara mavitrika amin’ny fikarakarana ny Radio Vazo Gasy ihany koa
Dimby (drat) : Mpitantana sy mpandrindra ny namana.serasera.org, mpandrindra ny forum.serasera.org, mpandrindra ao amin’ny chat.serasera.org ihany koa. Mpanome soso-kevitra hanatsarana ny vohikala.
Rado : Mpiara-miasa akaiky avy ao amin’ny linuxmg.org, mpandrindra ao amin’ny chat.serasera.org, fakàna hevitra amin’ny lafiny teknika. Anisan’ny manampy eo amin’ny fikirakirana ny lohamilina ihany koa.
Fara : Miandraikitra ny lafin’ny fifandraisana ao Madagasikara (03311 25801).
Ireo mpitantana manokana ao amin’ny forum (mumu, ikaretsaka, betty, ralay, methode, McFy, bichette, ravatorano, donemaskit, angie…)
Ireo mpitantana manokana ao amin’ny chat (mihanta, fanja, jo_, fyjl, betty, archibald, roxan)
Ary ireo namana maro izay mbola hiara-miasa aminay…
Ny eo amin’ny fitantanana ara-bola dia mahaleo tena tanteraka ny serasera.org. Ny zavatra vokarin’ny serasera.org dia maimaim-poana avokoa. Tsy misy vola alaina amin’ny mpikambana. Misy anefa ireo zavatra ilàna vola toa ny fanofàna ny lohamilina sy ny fampiantranoana ny serasera.org. Ny hany loharanom-bola hatramin’izao dia ireo dokambarotra vitsivitsy sendra mba azo sy ny fanomezan’ny malala-tanana. Raha toa ka misy vonona hanolotra fanampiana dia misy toerana azo hanaovana izany ao amin’ny vohikala serasera.org na koa mifandray mivantana amin’ny mpitantana ara-bola (ds na doc.strange@wanadoo.fr).
Fanamarihana kely fotsiny : izaho dia tsy mandray vola raha manome vola ahy mivantana ianareo fa aleo tonga dia alefa any amin’i ds.
Taotrano tsy efan’ny irery ny serasera.org. Matoa nahatratra izay dimy taona izay izy dia vokatry ny fiaraha-misalahy eo amin’ny samy Malagasy. Isaorana avokoa ireo rehetra nifarimbona amin’ny haharetan’ny serasera.org sy amin’ny mbola haharetany hanomezana fahafaham-po ny Malagasy tia serasera rehetra. Ankasitrahana manokana ireo miara-mitoto na dia tsy fantatry ny olona aza. Hivaly 100 sy 1000 heny anie ny vokatry ny hasasaranareo.
Hisy hetsika vitsivitsy hokarakaraina amin’ity taona ity raha tratra fa samia hotahian’Andriamanitra